UTC+14:00 - ဝီကီပီးဒီးယား
UTC+14:00 ~ 150 degrees W – တနှစ်ပတ်လုံး
ဒေသစံတော်ချိန်: ၂၀၂၀-၀၃-၂၂ ၀၇:၅၅:၅၈ ရှင်းသန့်
UTC+14:00 ဆိုသည်မှာ +14 နာရီတွင်ရှိသော UTC time offset ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ အမြင့်ဆုံးအချိန်ဇုန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုအချိန်ဇုန် ဧရိယာအတွင်းရှိ ဒေသများသည် ပထမဆုံး နေ့သစ်ကို မြင်ရသော ဒေသများဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ပထမဆုံး နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို ကျင်းပနိုင်သည်။
UTC+14 သည် ၁၈၀ ဒီဂရီ လောင်ဂျီကျူမျဉ်းမှ အရှေ့ဘက်သို့ ၃၀ ဒီဂရီ ဆွဲဆန့်ထားပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နေ့စွဲမျဉ်းအား ကြီးမားသော အခေါက်တစ်ခုဖြစ်စေရန် ဖန်တီးထားသည်။
၂ နေ့အလင်းရောင် ထိန်းသိမ်းသော အချိန်အဖြစ် (တောင်ကမ္ဘာခြမ်း နွေရာသီ)
နေ့အလင်းရောင် ထိန်းသိမ်းသော အချိန်အဖြစ် (တောင်ကမ္ဘာခြမ်း နွေရာသီ)[ပြင်ဆင်ရန်]
ဆမိုးအားနိုင်ငံ - ဆမိုးအားနိုင်ငံသုံး အချိန်များ
At the end of 29 December 2011 (UTC−10), Samoa advanced its standard time from UTC−11 to UTC+13 (and its daylight saving time from UTC−10 to UTC+14), essentially moving the international date line to the other side of the country. Following Samoa’s decision, Tokelau also advanced its standard time (used without daylight saving time), from UTC−11 to UTC+13.
↑ Ariel, Avraham (2005). Plotting the Globe: Stories of Meridians, Parallels, and the International Date Line. Greenwood Press, 149. ISBN 0-275-98895-3။
↑ "Tokelau: Wrong local time for over 100 years"၊7August 2012။
UTC+14 အသုံးပြုသော မြို့များအား ရှာဖွေရန်
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=UTC%2B14:00&oldid=409680" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။